Ihe omuma nke Max Planck. Mụọ maka ịkpa ike ya na usoro izipụta ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe omuma nke Max Planck
Ebe ọ bụ na sayensị amalitela, ụwa amalitela site na mmali na ókè. Ndozi nke ihe omuma n’ihe omumu physics, onwu, biology na ihe ndi ozo kwere ka mmadu nwee ibi ndu di iche karie nke ha nwere na aro ole na ole gara aga. Taa, anyị ga-ekwu maka otu onye ọka mmụta sayensị nke kara akara tupu na mgbe ọ gachara na onye bidoro ịdị adị nke tọọlọm. Ọ bụ ihe Max Planck.
E nyere onye sayensị a Nrite Nobel ma were ya dị ka onye okike nke echiche nke ga-eduga na mmepe sayensị na ụwa. You chọrọ ịmata ịkpa ike na akụkọ ihe mere eme nke Max Planck? Nọgide na-agụ n’ihi na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-achọ ịmata ihe.
1 Ọnye na-bụ Max Planck?
2 Ozizi kwantum
3 Max Planck na Albert Einstein
4 Ahụhụ na mmepe
Ọnye na-bụ Max Planck?
Aha ya bụ Max Karl Ernst Ludwig Planck. Ọ bụ onye sayensị German nke amụrụ na Eprel 23, 1858 na Kiel. Ọ bụ nnukwu onye nyocha gụrụ akwụkwọ na mahadum nke Munich na Berlin ebe ọ rụpụtara ụkpụrụ nduzi niile iji nye physics nke oge a. Na 1885, a hoputara ya dika oka mmuta na physics na mahadum Kiel ma mesịa rute na 1889, o gara Mahadum nke Berlin ebe o jere ozi dika onye nkuzi rue 1928.
N’oge ọ na-eme nchọpụta, ọ na-enyocha njirimara ike na etu o si arụ ọrụ. Nmiri nke ìhè, ngwa anya, ọrụ nke ike ike na ụmụ nje dị iche iche, wdg. Na 1900 o jisiri ike guzobe mmegharị nke ike. Ma ọ bụ na ike na-enwu dị iche iche, ọ bụghị usoro na-aga n'ihu. Ihe obula nke ike bu ihe amara dika ole. Site na aha a bụ otu esi kpọọ usoro izizi akụrụngwa.
Nkwupụta a kwantom bidoro bụrụ nke ịga nke ọma na mpaghara sayensị wee nye nkọwa nke ọtụtụ ihe ịtụnanya na-amaghị ruo mgbe ahụ. Ọ bụ mgbe ahụ ka, na-aga n'ihu na nyocha ya, ọ jisiri ike na-achọpụta ọdịdị ụwa niile. Kemgbe ahụ anyị maara ya dị ka Planck mgbe niile. N'ihi nchọpụta a, taa ọ ga-ekwe omume ịmatakwu banyere ọrụ nke ike na ọtụtụ puku nyocha na-emeziwanye, ebe ọ bụ na ihe a bụ ihe na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
Atụmatụ nke Quantum na-ekwu na ike nke ọ bụla kwantum nwere nwere hà ugboro ole radieshon bawanyere na mbara igwe mgbe niile. Nke ahụ bụ, ọ na-egosi anyị njirimara dị ike nke kwantum ọ bụla ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke usoro ike. Nke a bara ezigbo uru iji mata ọrụ ọrụ ike nke akụrụngwa yana ọbụlagodi nke ume ike na okike.
Ihe ndị ọ chọpụtara emeghị ka ihe mbụ anyị ghara ikwubi na ihe na-aga n’ihu bụ na radieshon na-agagharị. Mgbe ndị sayensị mechara ọtụtụ ọmụmụ ihe na-eme ugbu a, ha na-echezi na ụzarị ọkụ a na-akpọ electromagnetic na-akpali site n'ijikọta ngwakọta nke ebili mmiri na nke irighiri ihe.
Dị ka mgbe ọ bụla mgbe nchọpụta ọhụụ pụtara nke na-agbaji ihe niile guzobere (lee Ozizi banyere ịkwọ ụgbọ ala) Ndị ọkà mmụta sayensị jụrụ na mbụ. Ezigbo arụmụka na enweghị mgbagha dị mkpa iji gosipụta ihe ị na-ekwu. Ya mere, nchoputa nke Planck mere ha mechara kwenye site na nyocha nke ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ. N'ihi nchọpụta ndị a, physics malitere ịrụ ọrụ na mpaghara dị iche na nke mepere emepe. Nke a ubi nke physics maara dị ka kwantum arụzi na ọ bụ ntọala nke ihe niile dị mkpa ihe ọmụma na-amụ atomik ike. Ọ bụrụ na ihe niile dị na mbara ụwa anyị mejupụtara atọm na ụmụ irighiri ihe, ịmata ike ha na otu ha si arụ ọrụ dị oke mkpa.
Na 1905 ghọtara mkpa echiche Albert Einstein banyere radieshon electromagnetic. Ha abụọ rụkọrọ ọrụ na ọrụ ha niile dị ka ndị ọkà mmụta sayensị nke rụrụ ọrụ ịgbanwe ụwa ahụ.
Max Planck na Albert Einstein
Ebe Planck enweghị ike ịga n'ihu na nchọta nke aka ya, ọ bụ ntọala maka ndị sayensị ndị ọzọ dịka Einstein iji mepụta echiche ndị ọzọ. Na 1905, Einstein bipụtara tiori a maara dị ka fotoelectric na atụmatụ na nyocha nke Planck. O gosipụtara na ihe ọkụkụ nwere ike ịmịkọrọ ma na-enwupụta ume n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka ugboro ole ọkụ ma ọ bụ radieshon dị.
Usoro ụkpụrụ ndị a dịwanye mkpa na ụwa nke physics ruo mgbe, na 1930, ha bụ ntọala nke physics ọhụrụ. Site na nchọpụta nke Planck mere na nke gbanwere ụwa nke physics, o nwetara ọtụtụ ihe nrite, gụnyere Nobel Prize na Physics. Ọ nwere ihe ịga nke ọma na 1918. Ọzọkwa, na 1930, mgbe ọ rụchara ọrụ ya na Mahadum Berlin, a hoputara ya dịka onye isi oche nke Kaiser William Society for the Advancement of Science. Emechaa akpọrọ ya Max Planck Society.
N'oge ahụ Agha Worldwa nke Abụọ malitere na Planck na Hitler nwere nsogbu n'ihi mmegide ya megide ọchịchị ndị Nazi. N'oge dị iche iche, ọ rịọrọchitere ndị Juu ibe ya arịrịọ iji nyere ha aka. Ọ hapụrụ mkpakọrịta ahụ na 1933 iji bụrụ onye isi ozugbo Agha Warwa nke Abụọ biri.
Ahụhụ na mmepe
Ọ bụghị ihe niile Max Planck nwere na ndụ ya mara mma. Ọ ga-atakwa ahụhụ ma nwee ọtụtụ ọdachi. Nke mbụ bụ na, n’afọ 1909, mgbe ọ dị afọ iri ise, ọ tara ahụhụ nwunye ya nwụrụ ka ọ lụchara di afọ iri abụọ na abụọ. Ọ hapụrụ ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwanyị abụọ ejima. Diọkpara nwụrụ n’agha ahụ a lụrụ n’oge Agha Firstwa Mbụ n’afọ 1916. daughtersmụ nwaanyị abụọ ahụ nwụrụ mgbe ha na-amụ nwa, bọmbụ tụkwara ụlọ ha n’afọ 1944.
Ewezuga ihe a niile, dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughi, nwa nwoke ọdụdụ nwa metụtara mpụ megide ndụ Hitler wee nwụọ n'ụzọ jọgburu onwe ya na 1945. Ọ ga-anọrịrị ezinụlọ ya dum rue mgbe ya na nwunye ya na nwa ya nwanyị nke a nọ, ha kwagara Göttingen, ebe ọ nwụrụ na Ọktoba 4, 1947 mgbe ọ dị afọ 90.
Enwere m olileanya na ị masịrị akụkọ ndụ a nke Max Planck.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe omuma nke Max Planck
Osimiri Ukwu nke North America